Ukrain ilaa Tel Aviv Duulimaadyada Ukrain International Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ukrain ilaa Tel Aviv Duulimaadyada Ukrain International Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Ukraine War Deg Deg Ah
Diyaarada Ukrain International Airlines waxay si xoog leh kula talisaa inay si dhow ula socdaan cusboonaysiinta xeerarka iyo xannibaadaha cudurrada faafa ee waddan ay ku socdaan.
Ukraine International Airlines (UIA) waxay xasuusineysaa suurtagalnimada in la isticmaalo duullimaadyada caadiga ah ee u dhexeeya Ukraine iyo Israel in kasta oo xayiraadaha cusub ee karantiil ee khuseeya marka la soo galo dhulka Dawladda Israa'iil.
Hadda, qof kasta oo ku sugnaa aagga cas labadii toddobaad ee la soo dhaafay waa in lagu karantiilaa huteelka COVID-19 ee ay dowladdu maalgeliso ka hor inta aan laga helin baaritaanka PCR ee diidmada ah Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Ben Gurion. Rakaabku waxa uu markaa dhamaystiri karaa muddada go'doominta dhammaystiran (14 maalmood) ama 7 maalmood iyada oo ay ku xidhan tahay baadhis PCR dheeraad ah oo diidmo ah maalinta toddobaad ee karantiilnimada.
Intaa waxaa dheer, duullimaadyada waddadan, diyaaraddu waxay sidoo kale soo bandhigtay qiimaha xayeysiinta gaarka ah ee tigidhada u dhexeeya Tel Aviv iyo Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhia iyo Lviv.
Diyaaradaha Caalamiga ah ee Ukraine waxay si adag ugu talinayaan in si dhow loola socdo cusboonaysiinta xeerarka iyo xannibaadaha cudurrada faafa ee waddan loo socdo.
Duulimaadyada Caalamiga ah ee Ukraine PJSC, oo badanaa loo soo gaabiyo UIA, waa calanka side iyo duulimaadka ugu weyn ee Ukraine, iyada oo xafiiskeeda ugu weyn ku leh Kyiv iyo xarunta ugu weyn ee garoonka Caalamiga ah ee Borispil ee Kyiv.